SAWIRO:-Xal laga gaaray xiisadii ka taagneyd Gobolka Hiiraan – XAMAR POST
By Zakariye iiman On Jul 12, 2019
Waxaa xal laga gaaray khilaafkii ka dhashay xilka qaadistii guddoomiyihii Maamulka Gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar (Dabageed) uu ku sameeyay Madaxweynaha Maamulka Hir-Shabeelle Maxamed Cabdi Waare taas oo sababtay in mudo bil ah aysan Shaqeyn xarumaha Maamulka.
Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya iyo Maamulka Hir-Shabeelle iyo siyaasiyiin kale ayaa ku howlanaa xalinta xiisadaas,waxana ugu dambeyn lagu guuleystay in guddoomiyihii Gobolka Hiiraan uu ogolaaday in uu xilka wareejiyo.
Guddoomiyaha Cusub ee Maamulka gobolka Hiiraan Cali Muxumed Caraale ayaa shalay la wareegay Xarumaha Maamulka oo ay ka Shaqa bilaabeen, isaga iyo kuxigeenadiisa, kadib wadahadallo maalmahaan ka socday Magalada Baladweyne.
Xalay ayaa waxaa Baladweyne kulan ku yeeshay Gudodomiyihii Gobolka Hiiraan ee xilka laga qaaday Yuusuf Axmed Hagar (Dabageed) iyo guddoomiyaha Cusub, iyaga oo halkaasi ku dhameeyay waxyaabihii sababay in xilka uu wareejin waayo Yuusuf Dabageed.
Wararka la helayo ayaa waxaa ay sheegayaan in dhawaan uu xilka wareejin doono Guddoomiyihii hore ee Maamulka Gobolka Hiiraan, iyada oo xalinta xiisadaan ay soo dhaweeyeen qeybaha kala duwan ee Bulshada ku nool Magalada Baladweyne.
NISA oo sheegtay iney gacanta ku dhigtay laba Shabaab ah oo dil damacsanaa.